Garyaqaanka Khilaafaadka ee Khilaafaadka Khilaafaadka ee Peoria, Illinois | Thomas Howard
Khilaafaadka Khilaafaadka Khilaafaadka
Qareennada Khilaafaadka Xashiishadda Cannabis
Meherad kasta, heshiisku wuxuu ansax yahay oo keliya marka dhammaan dhinacyada ay isku raaci karaan shuruudaha iyo shuruudaha. Haddii ay jiraan khilaaf, oo hal dhinac jabiya heshiiska, ka dib muran muran ayaa ka dhasha. Khilaafaadka qandaraaska ee xashiishadda, sida khilaafaadka kale, waxaa lagu xallin karaa gudaha iyo banaanka qolka maxkamadda.
Noocyada qandaraaska Jebinta
Jebinta noocan ahi waxay soo ifbaxdaa markii hal dhinac uusan u bixin sidii loo ballan qaaday. Xaaladda noocaas ah, xiriirku waa mid aan lagala tashan karin, iyo kooxda ay dhibaatadu saameysey waxay dooran karaan inay dacwayn karaan xisbiga aan ixtiraamin qaybtooda gorgortanka.
Haddii kooxda ay dhibaatadu saamaysay ku guuleysto, markaa qaybta kale ayaa bixinaysa magdhawga. Xisbiyadu waxay kaloo go'aansan karaan inay arrimaha ka xalliyaan maxkamadda iyagoo gacan ka helaya qareen karti u leh. Waxyaabaha kale ee lagu xallin karo jebinta heshiiska waxaa ka mid ah wax qabad gaar ah, iyo baajin iyo dib u celin.
Haddii kale loo yaqaan xadgudub sharci darro ah, xadgudubka noocan ah ma jabinayo xudunta heshiiska oo macnaheedu yahay in heshiisku wali ansax yahay. In kasta oo heshiiska uusan wax iska beddeleyn, xisbiga aan heshiiska jebinaynin weli wuu dacweyn karaa magdhowga.
Warshadaha xashiishadda si weyn ayaa loo habeeyey, sababta oo ah sharciga ayaa ku sii jiraya inuu isbeddelo, waa wax iska caadi ah milkiilayaasha ganacsiga ee warshadaha inay is dhex galaan muranka. Halkani waa meesha ay ka imanayaan qareennada qandaraaslayaasha xashiishka.
Qareenada khibrad u leh arimahan ayaa ka caawin kara dhexdhexaadinta iyo gar-qaadida markii muranka qandaraas yimaado. Markaad dhinacaaga u aragto qareen khibrad leh, waad ilaalin kartaa labada liisankaaga ganacsiga iyo hantida kale ee laga yaabo inay qatar gasho haddii khilaaf qandaraas jiro.
Xitaa marka aysan jirin wax khilaafaad ah, waxaa jira arrimo sharci oo badan oo milkiilayaasha ganacsiyada ay xalliyaan waqti ka waqti. Qareenku wuxuu gacan ka geystaa inuu ku siiyo talo ku saabsan waxa la sameeyo si sharciga loo waafajiyo mar kasta.
Anigu waxaan ahay Qareenka Thomas Howard, waxaanan la shaqeeyaa koox qareeno ah oo aqoon fiican u leh warshadaha xashiishadda. Shirkaddeenna waxay ku taalaa Peoria, Illinois, halkaas oo aan ku siino hagis iyo latalin xagga sharciga ah, iyo sidoo kale in aan ka caawino dadka ganacsatada ah in ay ka abuuraan maandooriyaha cannabis gobolka. Haddii aad u baahan tahay qareen aagga Peoria, nala soo xiriir, oo waan ku faraxsanaan doonnaa inaan ku caawino.
Waxaa jira sababo badan oo ah inaad la shaqeyso shirkadayada. Mid ahaan, waxaan ognahay sida loola dagaallamo caqliga oo aan u ilaalino macaamiisheenna ganacsigooda iyo hantidooda. Waxaan si buuxda u fahamsanahay warshadaha xashiishadda oo waan ognahay talaabooyinka la qaadayo markii aad u baahatid wakiil.
Xitaa si ka sii fiican, waxaan heysanaa sanado badan oo waayo aragnimo ah. Shirkaddayada ayaa shaqeyneysa in muddo ah, waxaan si guul leh u qabannay boqolaal khilaafaadyo xashiish oo waagii hore. Waxaan kaloo la macaamilnay khilaafaadka hantida xashiishadda, dacwada maxkamadda, iyo dhexdhexaadinta khaaska ah.
Waan fahamsanahay dhammaan shuruudaha xashiishadda sida qaanuunku dhigayo oo kaa caawinaya inaad ilaaliso meheraddaada. Waxaan sidoo kale ognahay waxa la sameeyo markii murannada lammaanuhu ay gelinayaan meheradda aad ku dhibtooday inaad ku dhisto khatar.
Meel kasta oo aad ka welwelsan tahay, waa lagugu soo dhaweynayaa inaad nala hadasho, waxaanan kaa caawin doonnaa inaad falanqeyso xulashooyinkaaga inta aan hubin doonno inaad sii waddo hawlgallada u hoggaansan sharciga.